Isixhobo esitsha soKhuseleko kubakhenkethi samaPolisa aseSpain eCamino de Santiago Pilgrimmage
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » ISpain Iindaba Eziphambili » Isixhobo esitsha soKhuseleko kubakhenkethi samaPolisa aseSpain eCamino de Santiago Pilgrimmage
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
ICamino de Santiago uhambo
ICamino de Santiago, eyaziwa ngesiNgesi njengeNdlela yaseSt.James, ngumnatha wonqulo olukhokelela kwindlu yompostile uSanta James Omkhulu kwicawa enkulu yaseSantiago de Compostela eGalicia emantla ntshona eSpain. Inkcubeko ibamba ukuba amasalela angcwele angcwatyelwe apha.
“I-Protegemos el Camino: Año Jubilar 2021-2022” ngokoqobo ithetha, Sikhusela iNdlela: Unyaka weNtlokoma 2021-2022.
Inkqubo entsha ijolise ekukhuseleni iCamino de Santiago ukuze abahambi nabakhenkethi bonwabele indawo ekhuselekileyo.
Ukongeza, nanjengento entsha, ipolisa likazwelonke apha endleleni liya kuba liziko elisemthethweni lokugxotha iziqinisekiso.
UMlawuli-Jikelele wamaPolisa kuZwelonke, uFrancisco Pardo Piqueras, wabonisa inkqubo “iProtegemos el Camino: Año Jubilar 2021-2022” ejolise ekuqinisekiseni ukhuseleko lwabahambi abahamba amanqanaba ahlukeneyo eCamino de Santiago eSpain.
Ukusuka kwii-ofisi zamaPolisa eSizwe, kuyakubakho amapolisa amileyo apha endleleni azakusebenza njengendawo yokuqhagamshela nabahambi ngezonqulo kwaye bazakusebenzisana namaziko kunye neearhente ezichaphazelekayo. Ezi zikhululo ziya kuba ngamaziko asemthethweni okunyathela izitifiketi, into eyimfuneko ekufumaneni i- "la Compostela" nje ukuba bayigqibe iCamino.
Ulwazi kunye nezinto ezibonakalayo zibandakanya ikhowudi ye-QR yokufikelela ngokukhawuleza kwindawo enikezelwe kwiwebhusayithi yamaPolisa kaZwelonke, amapolisa.es, Ukunyusa unyaka okhuselekileyo weJacobean eSpain. Kuyo, abahambi ngezonqulo baya kufumana iingcebiso ngokhuseleko, indawo ekumiswa kuyo isikhululo samapolisa esikufutshane, iindawo zokunyathela eziqokelelwe endleleni, kunye nokukwazi ukukhuphela ikhadi lokunyathela. Inombolo yongxamiseko ngu-091.
Amapolisa aphuma kwamanye amazwe, ikakhulu aseJamani, eFrance, e-Itali nasePortugal, azakuqhubeka nokujikeleza kunye namalungu amaPolisa kaZwelonke ukunceda abahambi nabakhenkethi bamanye amazwe. Imisebenzi yabo iya kuba, phakathi kwezinye izinto, ukwenza ukujikeleza, ngakumbi ngeenyawo, kodwa nasezimotweni, ukuthintela ulwaphulo-mthetho kwiindlela zoluntu.
Baza kunxibelelana nabemi ngokubanzi kwaye, ngakumbi, kunye nabakhenkethi belizwe labo babancedise emsebenzini wokuguqulela kwaye babancede babaxhase kwizikhalazo. Amagosa asebupoliseni angaphandle aya kujikeleza enxibe iyunifom yenkonzo yesizwe.
Amapolisa kaZwelonke enza ezi ngcebiso: